Firita mamwe matambo ane mavara eAirTags | IPhone nhau
Mafirita ane mavara akasungirirwa eAirTags
Kune akawanda makuhwa akanongedzera kune zvinogona kuburitswa maAirTags eKeynote yanhasi. Mune ino kesi chiitiko «Chitubu chakatakura»Izvi zvichatanga munguva pfupi ichave protagonist yekuburitswa kwayo.
Apple iri kukumbira ichi chigadzirwa uye ndeyekuti izvo zvinotarisirwa nezve kuvhurwa kwayo zvave zviri pakati perunyerekupe kwemakore mazhinji. Iwo AirTags angave akafanana chigadzirwa kune maTiles asi aine mamwe mabasa ekuwedzera uye vanogona kuve nenguva yavo yakakosha mukuburitswa kwanhasi Kubvumbi 20.
Kuburitsa kuchangobva kuitika kunoratidza mumifananidzo mhando yesilicone tambo iyo iwe yaunogona kuwedzera iyo AirTags kuiturika pasutukesi, bhegi, kiyi mhete nemakiyi, nezvimwe.. Saka zvinoita sekunge masikati ano ndiyo ichave yakasarudzwa neApple kuunza kamwe chete kune ese aya madhivhisi.
Iko kushanda kweichi chigadzirwa kunoenderana nezvinhu izvo Apple inoda kuwedzera kwavari, asi pamusoro pezvose kuti uve nechigadzirwa chakazara uchafanirwa kugadzirisa mutengo wayo kumusika wazvino wezvigadzirwa zvakafanana. Uye ndizvo mutengo wakakwira pane ichi chishongedzo unogona kuuita chigadzirwa chakaderera-kutengesa. Isu tinofara chaizvo kuona izvo Apple ichazounza masikati ano, rudzi urwu rwevakuru veApple trackers inogona kunge iri imwe yezvigadzirwa zvichaburitswa nhasi.
Ehezve tave nerunyerekupe pamusoro pavo kwemakore mazhinji uye nhasi zvinoita sekunge iro rinogona kunge riri zuva, sekutaura kwatakaita mupodcast yesvondo rapfuura kana nguva ino vasina kuunzwa pachiitiko chanhasi tingatove nekukahadzika kuti dzakatangwa. Iwe unofunga isu tichava neAirTags nhasi?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Mafirita ane mavara akasungirirwa eAirTags
Mario Lopez akadaro
Kanganiso yandinotarisa ndisina kana tambo idzi mumaoko angu. Scheme ini ndinoona kuti oparesheni yacho yanga iri nani kana buri reinishuwarenzi raive kumashure.
Pindura kuna Mario Lopez
Apple inowedzera mutsva wepepuru kune huwandu hweiyo iPhone 12
Chitoro chepamhepo chakavharwa! Pane zvishoma zvasara kutanga mharidzo